ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၁) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on November 13, 2013 at 13:53 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ရုံးတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါအချင်းချင်းပြောဆိုဆက်ဆံရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဘယ်ပစ္စည်းဘယ်မှာရှိတာ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေငှားတာကအစ ပရင်တာအလုပ်မလုပ်တာမျိုး၊ ကိုယ်မှာထားတဲ့ပစ္စည်းဒီနေ့ဘာကြောင့်မရောက်တာလဲစိတ်ပူတာမျိုးတွေကအစ ပြောစရာတွေတပုံကြီးပါ။ ဒီတော့ အင်္ဂလိပ်စကားကိုရုံးတွင်းပြောဆိုရမယ့်အခြေအနေအတွင်းမှာအခြေခံထားတဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ချို့တင်ပြသွားပါမယ်။
စက်ပစ္စည်းပြဿနာများ Machine Problems
ခေတ်သစ်ရုံးခန်းတွေဟာ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းတွေ office automation တွေနဲ့တန်ဆာဆင်ထားကြပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းဖြစ်လေတော့ အချိန်တန်တဲ့အခါ၊ လူများလက်များတဲ့အခါ၊ မှားယွင်းအသုံးပြုမိတဲ့အခါ ပျက်တတ်ပါတယ်။ “ပရင်တာပျက်တယ်။ စာရွက်ညပ်တယ်။ ပြင်ရမယ်။ စာရွက်ကုန်သွားပြီ။ ထပ်မှာရမယ်” စတာတွေကို အောက်ပါအတိုင်းပြောနိုင်တယ်။
"Do you know what's wrong with the printer?"
"Who do we call to reportaproblem with the printer?"
"When is the printer going to be fixed?"
"The printer next to the break room is broken. Where is the other printer?"
"The copy machine is jammed again."
"We need to get the copy machine fixed."
"A technician is coming this afternoon to fix the copy machine."
ဒီနေ့လယ် မိတ္တူကူးစက်ပြင်ဖို့ စက်ပြင်ဆရာလာလိမ့်မယ်။
"Where is the paper for the copy machine?"
"We need to order more paper. We're running low."
စာပို့ခန်း Mail Room
ကုမ္ပဏီကြီးများမှာတော့ mail room ဆိုတာရှိပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းအတွက် ကိုယ်ပိုင် mail box ကလေးတွေထားပေးထားတယ်။ အသုံးဝင်မယ့်စာကြောင်းတစ်ချို့ပါ။ mail အစားယခုခေတ် email အတွက်လည်းအသုံးဝင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ စာတိုက်ပုံးမရှိသေးဘူး။ ဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးရအောင်လုပ်ရမလဲ။
ကုမ္ပဏီကြီးပြီဆိုလျှင် အဆောက်အဦးကလည်းကြီး အခန်းတွေကလည်းများနဲ့ ရုံးတွင်းမှာတင် စာပို့ စာယူလုပ်ရတာသဘာဝပါ။ ဥပမာ စာရင်းစစ်ဌာနကို စာရင်းဇယားတွေပို့ချင်တယ်ဆိုရင် Inter Office mail service ရုံးတွင်းစာပို့စံနစ် (IO) ကိုသုံးရပါတယ်။
အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများတောင်းခံခြင်း Requesting Equipment
လုပ်ငန်းကြီးလျှင်ကြီးသလို လုပ်ငန်း၏အသုံးအဆောင်၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာ တွေများလာသည့်အခါ store, warehouse လိုသီးသန့်ဌာနတစ်ခုကနေ ထုတ်ယူသုံးစွဲရပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာအောက်ပါစကားတို့ကို ပြောဖို့လိုအပ်လာပါမယ်။
"I'm out of staples. Do we have any more in the supply room?"
စာအုပ်ချုပ်အပ် ကုန်နေပြီ။ စတိုခန်းထဲမှာ ရှိသေးလား။
"The supply room is running low on pens. I think we should get more."
စတိုခန်းမှာ ဘောပင်ကုန်ကာနီးနေပြီ။ ထပ်မှာရမယ်ထင်တယ်။
"My monitor is very old. It'salittle blurry and it gives meaheadache when I look at it foralong duration. Could I getanew monitor?"
ကျွန်တော့်မော်နီတာကအရမ်းဟောင်းနေပြီ။ နည်းနည်းမှုန်ဝါးဝါးဖြစ်နေတော့ ကြာကြာကြည့်လိုက်ရင် ခေါင်းမူးလာတယ်။ မော်နီတာအသစ်ရနိုင်မလား။
"My computer is too slow. It slows down my work. I would likeafaster computer. It will increase my efficiency on many of my tasks."
ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကအရမ်းလေးနေတယ်။ အလုပ်ဖင့်တယ်။ ကွန်ပျူတာအသစ်တစ်လုံး လောက်လိုချင်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာပိုတွင်ကျယ်လာပါလိမ့်မယ်။
"I would like an ergonomic keyboard. I can type much faster with those."
ergonomic keyboard တစ်ခုလောက်လိုချင်တယ်။ အဲဒါနဲ့ဆိုပိုမြန်မြန်ရိုက်နိုင်မယ်။
*** ergonomic (adj) လုပ်ငန်းခွင်နှင့်လုပ်အားစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး။ (၄င်းစံအရထုတ်လုပ်ထားသောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်း)
"Can I getanew chair? This one is so uncomfortable."
"Can you get meaheadset for the telephone? I'm on the phone most of the day and I would like to free up my hands."
တယ်လီဖုန်းအတွက်နားကြပ်တစ်ခုလောက်ပေးနိုင်မလား။ တစ်နေကုန်ဖုန်းပြောနေရတော့ လက်နဲ့မကိုင်ဘဲထားချင်တယ်။ (လက်နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်)
ရုံးတှမှောအလုပျလုပျကွတဲ့အခါအခငျြးခငျြးပွောဆိုဆကျဆံရတာတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။ ဘယျပစ်စညျးဘယျမှာရှိတာ၊ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးလေးတှငှေားတာကအစ ပရငျတာအလုပျမလုပျတာမြိုး၊ ကိုယျမှာထားတဲ့ပစ်စညျးဒီနဘေ့ာကွောငျ့မရောကျတာလဲစိတျပူတာမြိုးတှကေအစ ပွောစရာတှတေပုံကွီးပါ။ ဒီတော့ အင်ျဂလိပျစကားကိုရုံးတှငျးပွောဆိုရမယျ့အခွအေနအေတှငျးမှာအခွခေံထားတဲ့ သငျခနျးစာတဈခြို့တငျပွသှားပါမယျ။
စကျပစ်စညျးပွဿနာမြား Machine Problems
ခတျေသဈရုံးခနျးတှဟော ရုံးသုံးစကျပစ်စညျးတှေ office automation တှနေဲ့တနျဆာဆငျထားကွပါတယျ။ စကျပစ်စညျးဖွဈလတေော့ အခြိနျတနျတဲ့အခါ၊ လူမြားလကျမြားတဲ့အခါ၊ မှားယှငျးအသုံးပွုမိတဲ့အခါ ပကျြတတျပါတယျ။ “ပရငျတာပကျြတယျ။ စာရှကျညပျတယျ။ ပွငျရမယျ။ စာရှကျကုနျသှားပွီ။ ထပျမှာရမယျ” စတာတှကေို အောကျပါအတိုငျးပွောနိုငျတယျ။
ဒီနလေ့ယျ မိတ်တူကူးစကျပွငျဖို့ စကျပွငျဆရာလာလိမျ့မယျ။
စာပို့ခနျး Mail Room
ကုမ်ပဏီကွီးမြားမှာတော့ mail room ဆိုတာရှိပါတယျ။ ၀နျထမျးတဈယောကျခငျြးအတှကျ ကိုယျပိုငျ mail box ကလေးတှထေားပေးထားတယျ။ အသုံးဝငျမယျ့စာကွောငျးတဈခြို့ပါ။ mail အစားယခုခတျေ email အတှကျလညျးအသုံးဝငျပါတယျ။
ကြှနျတေျာ့မှာ စာတိုကျပုံးမရှိသေးဘူး။ ဘယျသူနဲ့ဆကျသှယျပွီးရအောငျလုပျရမလဲ။
ကုမ်ပဏီကွီးပွီဆိုလြှငျ အဆောကျအဦးကလညျးကွီး အခနျးတှကေလညျးမြားနဲ့ ရုံးတှငျးမှာတငျ စာပို့ စာယူလုပျရတာသဘာဝပါ။ ဥပမာ စာရငျးစဈဌာနကို စာရငျးဇယားတှပေို့ခငျြတယျဆိုရငျ Inter Office mail service ရုံးတှငျးစာပို့စံနဈ (IO) ကိုသုံးရပါတယျ။
အသုံးအဆောငျပစ်စညျးမြားတောငျးခံခွငျး Requesting Equipment
လုပျငနျးကွီးလြှငျကွီးသလို လုပျငနျး၏အသုံးအဆောငျ၊ ကိရိယာတနျဆာပလာ တှမြေားလာသညျ့အခါ store, warehouse လိုသီးသနျ့ဌာနတဈခုကနေ ထုတျယူသုံးစှဲရပါတယျ။ အဲဒီအခါမှာအောကျပါစကားတို့ကို ပွောဖို့လိုအပျလာပါမယျ။
စာအုပျခြုပျအပျ ကုနျနပွေီ။ စတိုခနျးထဲမှာ ရှိသေးလား။
စတိုခနျးမှာ ဘောပငျကုနျကာနီးနပွေီ။ ထပျမှာရမယျထငျတယျ။
ကြှနျတေျာ့မျောနီတာကအရမျးဟောငျးနပွေီ။ နညျးနညျးမှုနျဝါးဝါးဖွဈနတေော့ ကွာကွာကွညျ့လိုကျရငျ ခေါငျးမူးလာတယျ။ မျောနီတာအသဈရနိုငျမလား။
ကြှနျတေျာ့ကှနျပြူတာကအရမျးလေးနတေယျ။ အလုပျဖငျ့တယျ။ ကှနျပြူတာအသဈတဈလုံး လောကျလိုခငျြတယျ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့လုပျငနျးဆောငျတာတှမှောပိုတှငျကယျြလာပါလိမျ့မယျ။
ergonomic keyboard တဈခုလောကျလိုခငျြတယျ။ အဲဒါနဲ့ဆိုပိုမွနျမွနျရိုကျနိုငျမယျ။
*** ergonomic (adj) လုပျငနျးခှငျနှငျ့လုပျအားစှမျးရညျမွှငျ့တငျရေး။ (၄ငျးစံအရထုတျလုပျထားသောအသုံးအဆောငျပစ်စညျး)
တယျလီဖုနျးအတှကျနားကွပျတဈခုလောကျပေးနိုငျမလား။ တဈနကေုနျဖုနျးပွောနရေတော့ လကျနဲ့မကိုငျဘဲထားခငျြတယျ။ (လကျနဲ့အလုပျလုပျနိုငျအောငျ)
Permalink Reply by white Girl on November 13, 2013 at 17:01
Permalink Reply by Phyo zaw on November 13, 2013 at 17:11
Thank you so much for your lesson and i really like it.
Permalink Reply by Nyunt Nyunt Oo on November 13, 2013 at 18:38
အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။English for Office Usage အမြဲတမ်း သင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ။
Permalink Reply by Htoo Rein Lwin on November 13, 2013 at 21:03
Permalink Reply by Nant Theingi Than on November 14, 2013 at 11:57
I like these conversation. I work asacompany staff long time but I cannot speak well.
Permalink Reply by phyu pyar than naing on November 14, 2013 at 17:22
Permalink Reply by thwe thwe phyo on November 15, 2013 at 10:49
Permalink Reply by khinthidasoe on November 27, 2013 at 5:48
Permalink Reply by yancaixiu on January 22, 2016 at 13:17
how to download this file? Pls